Dr Sada Mire: Aqoonyahankii koowaad Afrikaan Ah Ee Ku Guuleysta Abaal-marinta Buuggaagta SAFA | Berberanews.com
Home WARARKA Dr Sada Mire: Aqoonyahankii koowaad Afrikaan Ah Ee Ku Guuleysta Abaal-marinta Buuggaagta...
Hargeysa(Berberanews): Dr. Sada Mire, aqoonyahanad baratay cilmiga Aasaarta qadiimiga ayaa ku guuleystay abaalmarinta SAFA 2021, oo ay ku mutaysatay buug ay qortay ee #Divine_Fertility, isla markaana noqotay aqoonyahankii u horeeyey aan Yurub ahayn ee ku guulaysta abaal-marintan.
Dr Sada Mire waxay wax badan ka qabtay baahinta aasaarta iyo hiddaha geeska Afrika, gaar ahaan Somaliland, wuxuuna dhiirri-gelin u yahay jiilka cusub ee aqoonyahannada, gudaha Afrika iyo meelo kaleba.” Ayuu yidhi Professor Insoll, oo taxliil ku sameeyey buuga.
War-bixintan waxa soo turjumay Tifaftiraha Shabadaka Wararka ee Hayaannews Mustafe Janaale
-Kani waa shaqo kalsooni leh, oo xirfad leh oo uu leeyahay qof si gaar ah u qalma si uu u fuliyo cilmibaarista khuseysa … buug cajiib ah oo cad, oo laga yaabo kaliya Sada Mire (oo ay weheliso aqoonteeda aragtiyeed ee dhowr farsamooyin tacliimeed iyo isu -dhowaansho maxalli ah) waa la gaadhi lahaa. Tani waa shaqo cilmiyeed, oo leh rafcaan guud oo aad u ballaaran”. ayuu yidhi Neal Ascherson, oo ah qoraaga The King Incorporated horena u ahaa saxafi ka tirsan The Observer
Previous articleDr Sada Mire became the first African Scholar To win SAFA Book Prize for Her Book Divine Fertility
Next articleAyesha Khan: ‘Taliban ma oggola fannaaniinta,